Rabshado khasaare geystay oo maanta ka dhacay Magaalada Laascaanood – STAR FM SOMALIA
Rabshado khasaare geystay oo maanta ka dhacay Magaalada Laascaanood
Saddex Haween ah ayaa maanta oo Khamiis ah ku dhaawacmay rabshado ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Rabshadahan ayaa bilaabmay kadib markii gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan Millateriga Somaliland ay soo galeen gudaha magaalada si ay uga adeegtaaan laakiin waxa ay isku dhaceen dad shacab ah.
Dhaawaca Saddexda Dumarka ah oo laba xaaladdoodu culus tahay ayaa la dhiggay Cisbitaalka Manhal ee magaalada Laascaanood.
Goobta ay ka dhaceen rabshadaha ayaa waxaa ilaa hadda ka taagan xiisad colaadeed, waxaana markale laga cabsi qabaa in ay rabshado kale dhacaan.
Maamulka Somaliland weli kama aanay hadlin rabshadahan, balse saraakiisha Booliska Somaliland ayaa waxa ay tilmaameen in ay faah faahin ka bixin doonaan dhacdadan.
Dowlada Soomaaliya oo heshiis dalka dib loogu soo celinayo qaxootiga la gashay dowlada Denmark